May oo soo bandhigeysa qorshaheeda cusub ee Brexit • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / May oo soo bandhigeysa qorshaheeda cusub ee Brexit
May oo soo bandhigeysa qorshaheeda cusub ee Brexit
January 21, 2019 - By: Hanad Askar
Baarlamaanka UK ayaa maanta oo Isniin ah ka sugaya Raysalwasaaraha Theresa May inay soo gudbiso qorshaheeda cusub oo ay ku xalineyso mashruuca ka bixitaanka dalkaasi ee EU-da (Brexit) oo weli la isku mari la’a yahay qodobada ay ku kala baxayaan Midowga Yurub iyo UK.
Codkii todobaadkii hore Baarlamaanka UK u qaaday qorshaha 1aad ee Ms.May ay soo diyaarisay ayaa cod aqlabiyad ah ku diiday qodobada heshiiskaasi ku qornaa oo ay xildhibaanada UK sheegeen inaysan wadankaasi u cuntamin, diidmadaasi oo ay ka wada sinaayeen kuwa taageersan in UK ay kasii mid ahaato EU-da iyo kuwa u ololeenaya ka bixitaanka Midowga Yurub oo dhamaantood u arkay heshiiskaasi mid aan dhameystirneyn.
Ms.May ayaa dhinaca kale ka badbaaday mooshin codka kalsoonida ah oo ay mucaaridka ka gudbiyeen, balse waxay ku badbaaday 19 cod oo kaliya taasi oo muujineysa awooda mucaaridka kasoo horjeeda xukuumadeeda.
Dhinaca Midowga Yurub ayaa iyagu sheegaya in heshiiska uu Baarlamaanka UK diiday oo ahaa mid lasoo diyaarinayey 2 sano uu yahay kan kaliya ee ugu macquulsan oo ay ku kala bixikaraan labada dhinac, iyagoona sheegay in dhinaca EU-da aysan xiligan diyaar u ahayn gorgortan kale.
Mucaaridka UK ayaa diidan dhankooda in UK ay ka baxdo EU-da iyagoo aan wax heshiis ah wada gelin, arrintaasi oo ay sheegeen inay si weyn u dhaawici doonto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalkooda.
Theresa May ayaa la filayaa qorshaha labaad oo ay hada dooneyso ay tahay in dib loo dhigo xiliga horey loo qorsheeyey in dalka UK uu ka baxo EU-da oo ku beegan dhamaadka bisha Maarso, si ay wakhti dheeraad ah ugu hesho gorgortan cusub oo ay la gasho dalalka kale ee Midowga Yurub.